Iibso IPTV Transcoder ka FMUSER | Codeeyaha Daawashada Tooska ah ee ugu Fiican ee La Heli karo Hadda oo Iib ah
Wadarta (USD): 384
Ku saabsan FMUSER FBE300 IPTV Transcoder
Waa maxay sababta u dooro FBE300 IPTV Transcoder for Streaming Live?
Waxa ay dadku ku saabsan yihiin:
Qalabka bartilmaameedku ma taageerayo qaabka xogta cayriin?
Awoodda aaladda bartilmaameedku kuma filna, awoodda faylka asalka ah waa in la dhimo si loo habeeyo qaabka cusub?
Aaladaha cusubi kuma habboona nooca faylka asalka ah?
Mushkiladda daah-furka ee baahinta fiidyaha waxay u baahan tahay in si degdeg ah loo xalliyo?
Hab-maamuuska qalabka jira wuxuu u baahan yahay in la beddelo?
Codaynta aaladaha nidaamka miyuu u baahan yahay in la beddelo?
Ku riix fiidyowga goobta fiidyaha?
Sanadihii la soo dhaafay, sababta oo ah caannimada iyo horumarinta fiidiyowga IPTV, noocyada fiidiyoogu waxay bilaabeen inay kala duwanaadaan, oo leh qaabab kala duwan, borotokool, qaraaro, is-dhexgal qalab, iwm, iyo qalabkeena asalka ah had iyo jeer waxay u muuqdaan kuwo aan awoodin inay la socdaan kuwa ugu dambeeya. farsamada.
Beddelka qalabkii asalka ahaa waa waqti badan oo xoog badan iyo kharash badan. Si loo xalliyo dhibaatada noocaan ah, FMUSER waxay hadda bilaabaysaa transcoder-ka cusub ee FBE300 si uu ugu xalliyo dhammaan dhibaatooyinkaaga fiidiyowga IPTV.
All-in-one Hardware Live Streaming Aaladda
Sida codeer ahaan,
FBE300 waxay ku dhejin kartaa faylalka fiidiyooga ee durdurrada fiidiyowga IP waxayna ku riixi kartaa shabakadda si loogu isticmaalo calaamadaha dhijitaalka ah ee dadweynaha.
Sida cod-bixiye ahaan,
FBE300 waxay go'aamin kartaa qulqulka fiidiyoowga IP-ga ee HD-ga si loo soo bandhigo iyo dib-u-ciyaarista fiidiyoowga ah sidoo kale waxay noqon kartaa sanduuqa ugu sarreeya ee isticmaalka TV-ga.
Sida transcoder ahaan,
FBE300 waxay u rogi kartaa durdurrada fiidiyoowga IP-ga qaabab kale / borotokool / xalal iyo dib-u-qulqulaya qulqulka fiidiyowga IP-ga ee loo beddelay shabakadda. Si weyn loogu isticmaalo hawl-wadeennada TV-ga, hawl-wadeennada isgaadhsiinta, is-dhexgalka nidaamka, waxay si weyn u dhimi karaan kharashka nidaamka beddelka.
FBE300 waxay ku ciyaari kartaa faylalka fiidiyowga HD wax soo saarka HD ama xayeysiisyada bandhiga dhijitaalka ah.
FBE300 sidoo kale waxay noqon kartaa fikrado isku dhafan oo laba-qulqul ah oo isku mar ah oo muujinaya shaashado waaweyn iyo kuwo yaryar oo loogu talagalay waxbarashada fogaanta, telemedicine, faallooyinka barnaamijka, iyo in ka badan.
FBE300 waxa kale oo loo isticmaali karaa duubista barnaamijka iyo kaydinta. Waxay soo dejisaa oo kaydisaa durdurrada fiidiyoowga IP-ga waxaana si weyn loogu isticmaalaa duubista barnaamijka, la socodka iyo dib-u-celinta, iyo soo dejinta fiidiyoowga shabakadda shakhsi ahaaneed.
FBE300 waa aaladda kaliya ee yar ee suuqa ku jirta ee isku xidha codaynta, beddelka, codaynta, ciyaarta, kaydinta, iyo isku dhafka. Sababtoo ah cabbirkeeda isku dhafan, qiimaha dhaqaale, iyo hawlo dhammaystiran, FBE300 waxay aad ugu habboon tahay isku-dhafka nidaamka iyo shakhsiyaadka waxayna siisaa khibrad tayo sare leh oo fiidiyoow ah dhammaan isticmaalayaasha.
Xajmi yar oo si fudud loo qaadi karo.
Waa aaladda kaliya ee wax ka beddeleysa ee isku xirta codeynta, furista, iyo shaqada beddelka ee suuqa.
Fiidiyow la xusho iyo wax-soo-saar maqal ah oo isku mar ah ama hal-soo-saar maqal ah.
Waxay taageertaa is dhexgalka labada durdur ee fiidiyooga hal sawir, kaas oo ay soo saarto IP streaming iyo HD.
Waxay taageertaa transcoding isku mar ah ee laba durdurrada fiidiyooga ah, qulqulka RTMP ee aaladaha fiidiyowga, qulqulka server-yada warbaahinta, ama software dhinac saddexaad ah sida YouTube, Facebook, Wowza, FMS, Ustream, Nginx, VLC, vMix, NVR, iwm.
Si xor ah u beddel qaabka codaynta fiidyowga, xallinta, iyo borotokoolka si loo yareeyo isticmaalka xad dhaafka.
Xakamaynta heerka saxda ah ee jir, wax luminaya ma jiro wakhtiga dhabta ah, daahitaan hoose.
Waxay taageertaa u beddelashada faylalka fiidiyowga HD ama wax soo saarka qulqulka IP ee aaladaha kaydinta USB.
Taageer CBR/VBR code kontoroolka socodka
1 * Ada Ada Power
1* HD fiilada
1* Khadka Maqalka
FBE300 IPTV Transcoder oo loogu talagalay socodka tooska ah
Sida loo isticmaalo FBE300 IPTV Transcoder?
Jaantuska jaantuska ee FBE300 IPTV Tanscoder
Maamulka asalka ah ee FBE300 IPTV Transcoder
Halbeegyada Korontada ee FBE300 Video Transcoder
FBE300 IPTV Transcoder waa meel walba
Xayeysiiska Calaamadaha Dijital ah
Gudbinta barnaamijka TV-ga dhijitaalka ah
Habka baahinta TV-ga dhijitaalka ah ayaa dhigay sanduuqa ugu sarreeya
Nidaamka Dhamaadka Madaxa ee Shabakadda Laanta TV Dijital ah
Cirifka Laf-dhabarka TV-ga Dijital ah
IPTV iyo OTT Nidaamka-dhamaadka hore
Beddel HD Fiidiyowga Kaarka
NVR, Shabakadda Fiidiyowga
Soo dejiso Fiidiyowga Gaarka ah
NO. Shayga dhimaya
1 Hab-raaca gudaha Taageerada RTSP, RTP/UDP multicast, RTP/UDP unicast, HTTP, socodka TS caadiga ah, qulqulka jiidashada RTMP, borotokoolka HLS (m3u8), iwm.
2 Borotokoolka Soosaarka Taageerida RTSP, RTP/UDP multicast, RTP/UDP unicast, HTTP, socodka TS caadiga ah, qulqulka riixitaanka RTMP, qulqulka jiidashada RTMP, borotokoolka HLS (m3u8), iwm.
3 Xalinta xalka Waxay taageertaa gelinta xallinta 3840x2160 waxayna gadaal u socotaa la jaanqaadi kara dhammaan agabka xallinta
4 Xalka go'aanka Waxay taageertaa ilaa 1920x1080 xallinta waxayna taageertaa dhammaan soo-saarka xallinta caadiga ah hoos
5 Dajinta muuqaalka Taageer H.265/H.264, MPEG-II, iyo muuqaalada kale ee caadiga ah
6 Codeynta video Taageero H.264 codaynta algorithm, taageerada qulqulka wax soo saarka 50k bps ilaa 12M bps la hagaajin karo
7 Dejinta maqalka Taageer AAC-LC, AAC-HE, MP3, MP2, iyo cod-dejin kale oo maqal ah
8 Heerka muunada maqalka Taageer 44.1K Hz, 48K Hz, iyo ilo kale oo la qabsi ah, taageero dib u qaabaynta
9 Codaynta codka Taageer AAC-LC, AAC-HE, MP3, MP2, iwm., heerka code 48k bps ilaa 256k bps hagaajin karo
10 HD soo saarista La jaanqaadi kara HD 1.4a HD interface interface, taageeridda soo saarista codeeynta
11 saarka Audio 3.5mm interface wax soo saarka audio, taageero 3.5mm wax soo saarka line audio
12 Shabakadda Isku Xirka Isku xirka shabakada RJ45 100M Waxay taageertaa gelinta iyo soo saarista qulqulka fiidyaha isku mar
13 USB interface USB3.0 interface, taageero USB flash drive dibadda ama wadida adag ee mobilada
14 tilmaame LED Tilmaamaha tamarta (casaan) iyo heerka isku xirka fiilada shabakada iftiinka (cagaar)
15 danab Input DC 12V
16 deegaanka shaqaynta Heerkulka shaqada: 0-40 °C Qoyaanka shaqada: in ka yar 95%
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa FBE300 IPTV Transcoder gudaha:
Iyada oo la dhimayo xallinta fiidiyowga, xalkani wuxuu ku siin karaa fiidiyoow xallin hoose oo loogu talagalay isticmaaleyaasha Internetka ee gaabis ah. Tusaale ahaan, FBE300 transcoder wuxuu u rogi karaa 1080i @ 50fps fiidiyowga 1080p @ 30fps, 720p@25fps, ama 480p@25fps, oo u riixaya goob toos ah ama server-ka qulqulaya, si ay u yaraato isticmaalka xawaaraha.
Beddelka Qaabka Codaynta
Xalkani waxa uu wanaajin karaa isticmaalka broadband iyo wanaajinta ku haboonaanta qalabka adigoo u rogaaya qaabka codaynta ee qaababka ugu caansan sida MPEG-4, H.264, H.265. Tusaale ahaan, FBE300 waxay u beddeshaa qaabka MPEG2 oo sida caadiga ah loo isticmaalo baahinta TV-ga sanduuqyada set-top ee H.265 video iyo AAC audio (koodka ugu caansan) durdurrada iyo iyaga si ay u noolaadaan madal loogu talagalay streaming server.
Isla heerka caddaynta, MPEG-4, H.264, iyo H.265 waxay isticmaalaan bandwidth hoose marka loo eego MPEG-2, iyo waafaqsanaanta waxay ka sareysaa MPEG-2.
Iyadoo la yareynayo qulqulka fiidiyowga, xalkani wuxuu ku siin karaa fiidiyoow hooseeya oo loogu talagalay dadka isticmaala internetka. Tusaale ahaan, transcoder-ka FBE300 wuxuu u rogi karaa fiidiyooga 8Mbps 2Mbps wuxuuna ku qulquli karaa goobta tooska ah ama server-ka qulqulka si loo yareeyo isticmaalka bandwidth.
Xalkan waxaa lagu dabaqi karaa xaalado kala duwan. Transcoder-ka FBE300 wuxuu taageeraa wax soo saarka isku mar ee RTMP, RTSP, HTTP-TS, iyo durdurrada M3U8. Waxay la qabsan kartaa habab kala duwan, sida baahinta tooska ah, dalabaadka, iyo baahinta, iwm.
Xalkan waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu buuxiyo shuruudaha xallinta ee shaashadaha kala duwan sida TV-yada, buugaagta xusuus-qorka, iyo taleefannada gacanta. Transcoder-ka FBE300 wuxuu soo saari karaa HD , shabakadaha shabakadaha, labadan webi waxay taageeraan xalal kala duwan oo wax soo saar ah. Tan waxaa lagu eegi karaa shaashado cabbir kala duwan si loo dhimo isticmaalka xajmiyeedka iyo in la dhimo wax-ka-qabashada si loo horumariyo xawaaraha daawashada fiidiyowga.
USB ilaa Network Stream
Xalkan waxaa loo isticmaalaa in lagu riixo faylalka fiidiyooga ee goobta shabakadda. Transcoder-ka FBE300 wuxuu u beddelaa faylalka fiidiyooga ee USB flash drive una beddelo qulqulka fiidiyowga IP-ga, ka dibna wuxuu u gudbiyaa meelo kala duwan isagoo adeegsanaya borotokool kala duwan.
Isku-xirka Isku-xirka ilaa Faylka USB
Xalkan waxaa loo isticmaali karaa soo dejinta fiidiyooga shabakada shakhsi ahaaneed, duubista barnaamijka, kormeerida dib-u-celinta, iwm. Fiidiyowga shabakadaha waxaa loo rogi karaa fayl fiidiyoow ah waxaana lagu kaydin karaa USB-ga USB-ga ee barnaamijka dib-u-celinta fiidiyowga ama dib-u-baahinta.
Gudbinta Maqalka Internetka
Xalkani wuxuu awood u siinayaa gudbinta shabakada maqalka fog ee fog iyadoo la adeegsanayo FBE200 encoder iyo transcoder FBE300, kaas oo caadi ahaan loo isticmaalo gudbinta maqalka ee u dhexeeya qolka studio iyo munaaradda gudbinta. Isha barnaamijka maqalka waxaa lagu shubaa adeega maqalka iyada oo loo sii marayo codeeyaha FBE200 oo ay dejisay FBE300 una rogtey wax-soo-saarka maqal la'aanta ee gudbiyaha.
Qorshahan waxa loo istcmaalay in la isku daro laba fiidiyoow IP durdur ah oo hal muuqaal ah. FBE300 waxay isku dari kartaa laba fiidiyow oo IP-ga ah hal fiidiyow iyadoo loo eegayo habka curinta iyo cabbirka shaashadda ee aad rabto, waxayna ku soo saari kartaa IP iyo HD.
Laba Iniyo Laba Banaan
Qorshahan waxa loo istcmaalay in si isku mar ah loo beddelo laba fiidiyow oo IP-ga ah. FBE300 waxay isku mar u rogi kartaa laba fiidiyow oo IP-ga ah xallinta, qaabka codaynta, iyo borotokoolka wareejinta cabbirka ee aad rabto.
Codsiga Shaashada Xayeysiinta Dibadda
Xalkani wuxuu awood u siinayaa gudbinta wireless-ka ee fogaanta fog iyadoo la adeegsanayo furaha FBE200 iyo furaha FBE300. Xayeysiisyada ganacsiga ee isha barnaamijka waxaa u qulqulaya shabakada FBE200 encoder oo ay dejisay FBE300 oo ah wax soo saar fiidiyoow ah oo heersare ah oo loogu talagalay shaashadda xayeysiinta dibadda.
Xalkan waxaa loo isticmaalaa in lagu xalliyo dhibaatooyinka iswaafajinta borotokoolka kala duwan ee aaladaha kala duwan. FBE300 waxay u rogi kartaa MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 protocol video durdurrada nidaamka iOSsystem gaar ah HLS si ay u daboolaan baahida isticmaalayaasha kala duwan.